Andy Black pane ake ekurwa masimba, WWE, Chris Jericho uye Iyo Ghost yeOhio (Exclusive) - Wwe
Andy Black pane ake ekurwa masimba, WWE, Chris Jericho uye Iyo Ghost yeOhio (Exclusive)
Chinhu chinoshamisa pamusoro pehunyanzvi hwekurwa, uye mimwe mitambo yakawanda, ndeyekuti havana rusaruro. Wese munhu anogona kuseri kubatanidzwa, munhu wese anochida - uye zvinogona kuunza vanhu pamwechete vasingazomboite hurukuro.
Zvakanaka, Andy Biersack - ava kuita pasi pemoniker waAndy Black - haina kusiyana. Sezvo ndakura fan hombe yeWWE, NHL neNFL, ndakasvetuka mukana wekutaura naAndy sezvo yake yega yekushanya achipfuura neScotland.
Ndakanga ndine kuputika kutaura kune @andyblack pamberi pashoo nezuro. Vhidhiyo, chinyorwa uye makwikwi akasarudzika ekopi yakasainwa yeThe Ghost yeOhio (graphic novel) ichave inomuka munguva pfupi! pic.twitter.com/SlNqdUVCYf
- 𝕲𝖆𝖗𝖞 𝕮𝖆𝖘𝖘𝖎𝖉𝖞 (@consciousgary) Chikunguru 8, 2019
Manzwi aBiersack ane hushamwari akapatsanura dombo nesimbi nharaunda kubvira Vavhoti VemaVhivhuru vakazvisundira mukubwinya neakarova single Knives nePeni kubva Isu Tinosona Aya Maronda pamberi peFallen Angels roketi-yakasunga bhendi. Zvino, zvakadaro, Andy Black akawedzera tambo dzakawanda kuuta hwake - kubva pakuonekwa mune yakarova bhaisikopo American Satan kuburitsa yake yakajeka mifananidzo, uyezve, kuburitsa maalbhamu maviri ega.
Muimbi anokwezva anga agara ari enigma - kubva pamazuva ake aAndy Sixx kusvika pakushanduka kwake kuita Andy Black - uye apo BVB yakaonekwa muWWE kuburikidza neGehena MuSero 2014, apo In The End yaive dingindira, ini ndaigara ndichinetseka kuti kukwikwidzana kwakakanganisa sei Mr Biersack nevamwe vake veboka.
Huye, makore akati wandei gare gare uye Andy Black nehunyanzvi kukwikwidza vakayambuka nzira dzinoverengeka - Hatifanirwe Kutamba yaive dingindira rePayback, zvakare ichionekwa mumitambo ye2K, uye Andy ishamwari dzepedyo naAEW's Chris Jericho, saka inguvai iri nani yekubata murume iyeye?
Andy, ndatenda nekujoinha ini kutanga kwezvose. Zvino, ini ndakakuona uchirarama kakati wandei - zvese sechikamu cheVatema Veil Varoora uye saAndy Black. Zviripachena, vamwe vateveri veBVB vanenge vauya kuzokuona zvichibva pane izvo, asi ini ndinofunga zviito zvese izvi zvakasiyana zvakanyanya, zvakati omei kuona crossover. Kune chero munhu asina kumboteerera Vatema Veil Varoora, ungatsanangura sei 'Andy Nhema'?
Zvakaoma kwazvo kutsanangura mimhanzi yako. Ini ndinogara ndichiwana iwo mubvunzo unonetsa kupindura. Patakatanga, iwoyo ndiwo mubvunzo mumwechete wandingaite jee, nekuti vanhu vakaita senge, 'Ah, mimhanzi yedu inonzwika sekudengenyeka kwenyika kuri kukwikwidzwa nedhiragoni!' Asi hapana imwe nzira yekutsanangudza chaizvo chinonzi mimhanzi, kunze kwekuuteerera. Sonically, I try to make things that are ... I guess what you may call 'pop-lead' mupfungwa yekuti hapana zvinorema kupunzika kana kupopota, kana chero chinhu.
Zvakanyanya kufanana nezvimwe zvinondinetsa. Kunyangwe sekufurirwa kwandakaita nemumhanzi wesimbi ndichikura, ndaida Psychedelic Furs naBilly Idol, naAdam Ant, uye nezvinhu zvakadaro - saka uyu waive mukana wekugadzira mimhanzi yaive yakawanda mumhando iyoyo yekunzwa. Ini handidi kutaura nezve genre nekuti ini ndinoenda kwese kwese asi zvinofanirwa kuve zvishoma stylistically zvinokanganiswa new wave uye punk rock.
ZVINOTEVERA: Andy anoratidza kuti ndeupi mutsimba akamukurudzira zvakanyanya seKISS
KUUYA UP: Andy anovhura nezve hushamwari hwake naChris Jericho
chimwe chinhu chakanakira kuitira musikana wako
vane makore mangani jeff bezos vana
ndinofunga ndiri munhu akaipa
mweya yedzinza inowira murudo
zibukanana bhora super magumo zuva
mai vangu is a control freak
maitiro ekuita kuti imba yako idzokere panzira